Website-yada Puntland oo weerar ku qaaday Safiir Ahmed Abdi Salan iyo Hawiye –Damac waashay. | Warbaahin means Media - Somali news Online
Website-yada Puntland oo weerar ku qaaday Safiir Ahmed Abdi Salan iyo Hawiye –Damac waashay.
Send by Email	Warbaahin.com – Website-yada laga leeyahay Puntland hadii aad booqato maanta lixda war ee ugu koreeya mid walba waxaa lagu habaarayaa marna lagu aflagaadeeynayaa beelweynta Hawiye iyo Siyaasiyiintooda.
Website-yada Puntland waxay qoreen in Dowladda Federalka qabyaalad noqotay oo Safiiradii Dalka la wada siiyay Hawiye ! sidoo kale waxay qoreen in Ahmed Abdisalan ka qeybgalay dagaaladii Sokeeye ?
Jawaab kooban hadii laga bixiyo Kooxda Damaca Waalan ilhanaadooda?
Amb Nur Cadde oo u dhashay Hawiye ayaa xilkii Safiirnimada talyaniga laga qaaday,waxaana lagu bedelay Jeneral Muuse oo u dhashay Daarood.
Nur Cadde xil looma magacaabin,loomana wareejin meel kale.
Safiirkii Ethiopia u qaabilsanaa Somalia Saciid Nur oo beesha Daarood u dhashay ayaa xilkii laga qaaday,waxaana jagadiisii loo magacaabay Ahmed Abdisalan oo Hawiye u dhashay.
Saciid Nur waxaa loo magacaabay Safiirka Tanzania u fadhiya Somalia halka Nuur Cadde aan meelna loo magacaabin.
Safiir Ahmed Abdi Salan waxay ku eedeeyeen Website-yada Puntland inuu ka qeybgalay dagaaladii Sokeeye laakiin waxaan isweydiiyay sababta beenta intaas la eg ku qasabtay.
Ahmed Abdi Salan ma joogin dalka dagaaladii Sokeeye ,wuxuuna ku noolaa Kanada ,mana hubo inay ruuxaantiisa ka qeybgashay dagaalada ay sheegeen hasse yeeshee anigu waxay ila tahay in baroortoodu orgiga ka weyn tahay.
Website-yada Puntland iyo Siyaasiyiinta daaha gadaashiisa ka maamulaya waxaa haboonaan laheyd inay si toosa u cadeeystaan halka uu nabarka uga taagan yahay,waxay ahayd inay toos u dhahaan “ Wuxuu Ahmed Abdisalan eryay,hilfaha u qaaday Abdullahi Yusuf Ahmed”
Hadii Baroortoodu sidaasi tahay,waxaa waliba harsan in la xisaabtamayo oo xasuuqii Muqdisho loo xilsaaray guddi u dhashay beelweynta Hawiye ,si Cadaalada loo horgeeyo kuwii Xasuuqay maatada reer Muqdisho.
Website-yada Puntland ciwaanada ay qoreen maanta waxaan ka soo qaadan karnaa:-
Maxaad kala socotaa in DF Siyaasadii dalka Qabyaaladeysay!… 20-06-13
Maxey tahay Sababta loo Magacaabey Safiir Axmed Cabdisalaan? 20-06-13
Somaliya Dal u Xayiran Casimad La’ aan Haysata.
Dhageyso: Xil. Cabdi-Bare Yuusuf Jabriil oo dhaliilay Xukuumada Saaciid20-06-13
Dhageyso: Xil. Cabdi-Bare Yuusuf Jabriil oo dhaliilay Xukuumada Saaciid 20-06-13.
Beesha Hawiye oo heshay Safiirkii 18aad
Sida hadalkaan loo dhigay Hawiye & Daarood laakiin labada beelood waxba kama dhaxeeyaan maanta.
Damaca waalan iyo daandaansiga wuxuu ku kooban yahay Siyaasiyiin u dhashay Majeerteen oo ay ka mid yihiin Abdirahman Faroole,Abdiwali Gaas,Omar Abdirashiid iyo Mohamed Darwiish,iyagana ayaana dhaxli doona faa-iidada ka dhalata xumaanta ay dhiteeysanayaan.
Dooda ku saabsan Caasimaduna waxaan uga bixi lahaa “Muqdisho waa Caasimadda Jamhuuriyadda Somalia,waana ahaan doontaa inta gabadh u dhalatay beelweynta Hawiye nooshahay”
“Nin aan dagaal aqoonoow ,daandaansiga jooji”